लाेकप्रिय सन्देश २०७७ कार्तिक २७ गते 845
बाँके,कात्तिक २७ । नेपाल वाल संगठनको नाममा नेपालगञ्जको रामलिला मैदानमा सभाहल सहितको भवन छ । भवनसँगै प्रर्याप्त जग्गा पनि छ । तर भवन संरक्षणको अभावमा जीर्ण भएको छ । पछिल्लो समय नेकपा नेता दत्तप्रसाद आचार्य वाल संगठनको सभापतिमा नियुक्त भएपछि समितिको सम्पत्ति संरक्षणका लागि पहलकदमी अघि बढाउनुभएको छ । सभापतिमा नियुक्त भएको केही दिनमै समितिको प्रथम बैठक राखेर आचार्यले वाल संगठनलाई सक्रिय बनाउनुभएको छ ।
बैठकमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणा, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तव, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय, नेकपा बाँकेका सचिव अशोक कोइराला, नेता अशोक कर्माचार्य, भिव वली लगायतले वाल संगठनको नाममा भएको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सुझाव दिनुभयो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. राणा र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक श्रीवास्तवले वाल संगठनलाई सक्रिय बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । जीर्ण रहेको भवनलाई मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार लगायतसँग सहकार्य गरिने सभापति आचार्यले बताउनुभयो । वाल संगठनको कार्यालयसँगै वाल मन्दिर आधारभुत विद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ । सहभागीहरुले विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा समेत पहल गर्न सुझाव दिनुभएको छ । अध्यक्ष आचार्यले वाल संगठनलाई चलायमान बनाउन सबै जिल्लाबासीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा जीर्ण रहेको भवनको सरसफाई र मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेछ, आचार्यले भन्नुभयो, केही दिनमै योजनासहित थप पहल गर्नेछौं ।